ဆိုင်အမျိုးသမီးဗုဒ္ဓ Trends အားဖြင့်ကထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည် - Buddhatrends
Home / အားလုံးထိပ်
ရှပ်အင်္ကျီ & T-ရှပ်အင်္ကျီ
3 /4အင်္ကျီလက်
Black နဲ့ White က
Plus အားအရွယ်အစားအဆမတန်ကြီးမားအင်္ကျီ Dress
Plus အားအရွယ်အစားအဆမတန်ကြီးမားအင်္ကျီ Dress $60.00
မြည်းကြိုးကိုဖြည် Turtleneck ဆွယ်တာအင်္ကျီ Dress
မြည်းကြိုးကိုဖြည် Turtleneck ဆွယ်တာအင်္ကျီ Dress $72.00
ကားပေါ်မှာအင်္ကျီလက် Bohemian ထိပ်တန်း
ကားပေါ်မှာအင်္ကျီလက် Bohemian ထိပ်တန်း $67.00
Plus အား Size ကိုလေယာဉ်အမှုထမ်းလည်ပင်းအချိုးမညီ Split ကိုအင်္ကျီ
Plus အား Size ကိုလေယာဉ်အမှုထမ်းလည်ပင်းအချိုးမညီ Split ကိုအင်္ကျီ $60.00
multicolor အဆမတန်ကြီးမားဆွယ်တာအင်္ကျီ Dress
multicolor အဆမတန်ကြီးမားဆွယ်တာအင်္ကျီ Dress $87.00
ရှည်လျားသောအင်္ကျီလက် Asymetrical လဲမှို့အင်္ကျီ
ရှည်လျားသောအင်္ကျီလက် Asymetrical လဲမှို့အင်္ကျီ $67.00
Asymetrical အလွှာခရမ်းရောင်အင်္ကျီ Dress
Asymetrical အလွှာခရမ်းရောင်အင်္ကျီ Dress ရောင်းကုန်ပြီ
အပြောက် Dot Hipster အင်္ကျီ
အပြောက် Dot Hipster အင်္ကျီ $58.00
soft Bat အင်္ကျီလက်က Short Cardigan
soft Bat အင်္ကျီလက်က Short Cardigan $54.00
မြည်းကြိုးကိုဖြည် Plus အားအရွယ်အစားအဆမတန်ကြီးမားဆွယ်တာအင်္ကျီ Dress
မြည်းကြိုးကိုဖြည် Plus အားအရွယ်အစားအဆမတန်ကြီးမားဆွယ်တာအင်္ကျီ Dress $54.00
အဆမတန်ကြီးမား Batwing ပိတ်ချောအင်္ကျီ
အဆမတန်ကြီးမား Batwing ပိတ်ချောအင်္ကျီ $92.00
ပိတ်ချောထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် Cardigan $73.49
Plus အားအရွယ်အစားအဆမတန်ကြီးမားအင်္ကျီ Dress $69.00
လျော့ရဲရဲပန်း Printed Hippie အင်္ကျီ Dress
လျော့ရဲရဲပန်း Printed Hippie အင်္ကျီ Dress $89.00
Long က White ကအဆမတန်ကြီးမားလဲမှို့အင်္ကျီ
Long က White ကအဆမတန်ကြီးမားလဲမှို့အင်္ကျီ $76.20
ပန်းရောင် Lotus ပိတ်ချော Dress
ပန်းရောင် Lotus ပိတ်ချော Dress $71.10 $79.00
ဝါဂွမ်းပိတ်ချော Solid အဆမတန်ကြီးမားအင်္ကျီ
ဝါဂွမ်းပိတ်ချော Solid အဆမတန်ကြီးမားအင်္ကျီ $67.00
စပျစ်သီးကိုပန်း Pleated အင်္ကျီ
စပျစ်သီးကိုပန်း Pleated အင်္ကျီ $58.00
Plus အား Size ကိုလျော့ရဲရဲနဲ့ Grey ကအစင်းယေဘုယျ Dress $55.50 $74.00
ထိပ်အဘို့အစျေးဝယ်အမြဲပျော်စရာပါ! သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးအားလပ်ရက်ရုပ်ရှင်ကြည့်နေစဉ်အတွင်းတက် bundle မှကမ်းခြေသို့မဟုတ်အသစ်ဆွယ်တာအင်္ကျီမှထွက်ဝတ်ဆင်ရန်အချို့သောသစ်ကိုကန်ထိပ်ရှာနေကြသည်ဖြစ်စေ, Buddhatrends အောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်တီရှပ်များ, overisized ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ဤမျှလောက်ပိုကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း ထိုမျှလောက်ပိုပြီးပျော်စရာထိပ်အဘို့အစျေးဝယ်!
သငျသညျထိပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုအားလုံးဖောက်သည်မူရင်းအဖြစ်နှစ်သိမ့်ရာပူဇော်သက္ကာကို, မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအထဲကဝတ်ဆင်ဖို့တစ်ခုခုများအတွက်ပါ၏အပေါ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံသွား, အဖီးကိုသွား, သို့မဟုတ်သင့်နေ့စဉ်အမှုကိုလုပ်နေတာတောင်မှစဉ်တွင်အတွက်သပိတ်မှောက်ခံရလျှင်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွယ်တာအင်္ကျီစားဆင်ယင်နေတဲ့အကြီးအဖို့သွားလာရင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ကျီစားဆင်ယင်များမှာ ။
အင်္ကျီ T-ရှပ်အင်္ကျီ, Tank ကထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နှင့် Cardigans အားလုံး Buddhatrends မှာစျေးဝယ်သူတို့ခြွင်းချက်ဖြစ်လာသည့်အခါအလွန်သာမန်အသံ, ဒါပေမယ့်နိုငျပါသညျ! ကဲ့သို့သောအရာများ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မှတ်အဆမတန်ကြီးမားအနုပညာဥပမာ Abstract အင်္ကျီအတုယူကြောင့်ဂီတပွဲတော်သို့မဟုတ်ထွက်ရပ်တည်ရန်မကြောက်နေသောဖန်တီးမှုနှင့်မူရင်းလူတွေမဆိုစုဝေးဖို့ဝတ်ဆင်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောအပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကပ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်ထိပ်အားလုံးထွက်မတ်တပ်ရပ်ကာကြေညာချက်အောင်ကြောက်လန့်မဟုတ်သောလူတို့အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ခဲ့သော်လည်း, ထွက်ရပ်နေအမြဲပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုရှိသောဖြစ်ဖို့လိုလားမဆိုလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်စုဆောင်းခြင်းလည်းဆဲသိမ်မွေ့ကြေညာချက်ပိုစေလိုသောအဆိုပါအမျိုးသမီးများအတွက်ကွဲပြားနေဖို့ပို demure နှင့်ကျိုးနွံပစ္စည်းများပေးထားပါတယ်။ ဒီဖတ်နေဖောက်သည် Classic နှင့်မူရင်း၏ပြီးပြည့်စုံသောဟန်ချက်ရှာဖွေနေသည်သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အချိုးမညီလဲမှို့များနှင့်ပိတ်ချောအင်္ကျီစုံလင်သောသာဓကဖြစ်ပါသည်။
Buddhatrends အားလုံးအမျိုးသမီးများ, ရိုးရှင်းပြီးဂန္နေသောသူတို့ကိုရန်နှင့်ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်ကြပြီးမူရင်းရှာသောသူတို့အားရွေးချယ်စရာပူဇော်ကြောင်းထိပ်တစ်ဦးစုဆောင်းမှုရှိပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမဖဲ့ကိုရခြင်းအဖြစ်အပန်းဖြေတဲ့သဘောမျိုးဖြည့်စွက်အားလုံးနေချိန်မှာကြောင်းထိပ်၏ဤစုဆောင်းမှု၏စစ်မှန်တဲ့အလှတရားဖြစ်ပါသည်, တင်းကျပ်ဖြစ်ပြီး, ။ "